SEO (search engine optimization) — MYSTERY ZILLION
October 2012 edited October 2012 in Web Development
Company Website SEO အတွက် ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
လောလောဆယ် Company က IT team ကို လာမေးနေလို.ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နိုင်သလား။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် အပြင် company တစ်ခုကို outsource အပ်လိုက်ရမလားတဲ့။ အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ရင် ပိုတတ်မယ်ထင်တယ်။
လောလောဆယ် SEO အတွက်ဆိုရင် Google Key Word ကို Heading ထည့်ရေးတာရယ်၊ Robots text ဖိုင်ထားတာရယ်၊ Site Map ထားတာရယ် စသည်ဖြင့်လောက်ဘဲ သိတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ဆိုဒ်ရေးတိုင်း ထည့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ဂူဂဲလ် ပေါ်မှာ ထိရောက်တဲ့ SEO တခုရဖို. ကိုယ်တိုင် လုပ်ရင် ရနိုင်သလား၊ ရနိုင်ရင် နည်းလမ်းလေးများ ပေးပါလား။ ဒါမှ မဟုတ် အပြင် company တခုကိုဘဲ အပ်လိုက်ရမလား ခင်ဗျ။
တကယ်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖူးတဲ့ သူများ ရှိရင် နည်းလမ်းလေးများ ပေးပါလား။ ကျွန်တော် အခြေခံလောက်ဘဲ သိလို.ပါ။
ပြီးတော့ အမှန်ပြောရရင် တခြားကို အပ်လိုက်ရမှာ မလုပ်ချင်ပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာလုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါမှ နောက်တခါ တတ်မှာမှို.ပါ။
If you can handle it on your team, the profit is for your company.
As you know there are many techic for Search Engine Optimization.
Otherwise there are some penalty on SEO method, like
hidden character(using common use several keywords, which don't concern with web site), SEO spam program, Spam link, getting many links fromaaffiliate system and making the links by access counter, etc.
If you got penalty once, your site domain name and IP address will be deleted from
search engine index. In this case you will costs to fix ti.
@ATT ဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိချင်တာက ဘယ်လို နည်းတွေ လက်တွေ.မှာ သုံးနေလဲ ဆိုတာလေးကိုလဲ သိရင် ပြောပြပါလား။
အခြေခံတွေလောက်ကျွန်တော်လဲ သိပါတယ်။ နည်းနည်းပိုပီး လက်တွေ.မှာ ထိရောက်တဲ့နည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အကိုတို. ကုမဏီက ဂူဂဲလ် အပေါ်ဆုံးပေ့ချ် မှာပေါ်နေအောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ထားလဲ စသည်ဖြင့်လေးတွေပါ သိရင်ပြောပြပေးပါလား။
သီအိုရီ အရ ရယ်၊ အခြေခံစည်းမျည်း လေးတွေတော့ ကျွန်တော့်သိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ထိရောက်တဲ့နည်းဆိုတာက Ranking တွက်တာကို ထိရောက်အောင်တော့ လုပ်ယူလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရမယ် Google သုံးတဲ့ Ranking Algorithm က Incoming Link အပေါ်အခြေခံတော့ အခြားသောလူတွေက ကိုယ့်ဆီကို Outgoing Link များလေလေ Rank မြင်လာလေလေပါ အဲဒါကိုအတင်းလုပ်ယူရင်တော့ အပေါ်မှာ @ATT ပြောထားသလို penalty ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘက်က အဓိကလုပ်နိုင်တာက ကိုယ့် Site ထဲက Data တွေကို အပြည့်အဝ Crawl လုပ်သွားဖို့ပဲလုပ်နိုင်တယ် Crawl Frequency တွေအသေအချာသတ်မှတ် Sitemap အသေအချာထည့်ပြီး Google ဆိုရင် Webmaster Tools မှာ Submit လုပ် အရေးကြီးတဲ့ Information တွေကို Image နဲ့ထည့်ရင် Alternate Text တွေအသေအချာထည့်ပါ Metadata တွေအသေအချာထည့်ပေါ့ ဒါတွေက အခြေခံတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
Rank မှာ Keywords ရဲ့ Tags ဟာလည်း ထည့်တွက်ပါတယ် Same keyword ပဲ H1 ထဲမှာပါတာနဲ့ P ထဲမှာပါတာ Rank မတူပါဘူး အဲဒီ့အတွက်တွေလည်း သတိထားပါ URL မှာပါတဲ့ Keyword လည်းအရေးကြီးပါတယ် အဲဒါကြောင့် URL တွေကို Clean URL ြဖစ်ဖို့ရယ် Keyword တွေပါဖို့ရယ်လည်း သတိထားရမယ်။
အရေးအကြီးဆုံးက Product Name နဲ့ Domain Name ဟာြဖစ်နိုင်ရတူအောင်ယူပါ Product ABCD ဆိုရင် abcd.com ဟာအြမင့်ဆုံးပါ မဟုတ်ရင်တော့ ABCD ကို xyz.com နဲ့ Rank မြင့်ချင်ရင်တော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ့်ဆိုက်ကို Incoming များလို့ Rank မြင့်တာမဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်ဘာမှလုပ်မရတာ တစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဘယ်လိုမှ Rank ကိုမြင့်လို့မရဘူး နောက်ဆုံး Product ဟာ Interviews တွေလာလုပ် News တွေထဲပါတဲ့ အခြေအနေရောက်မှ Incoming မြင့်လာလို့ အပေါ်ရောက် လာတာလည်းမြင်ဖူးတယ် ဒါလည်း ဒုတိယနေရာကနေ အပေါ်ကိုတက်ဖို့ အတော်ကိုကြာပါတယ်။ အဲလိုဟာတွေသတိထားပြီးလုပ်ရင် ပုံမှန်ကအဆင်ပြေပါတယ် နောက်တစ်ခုက ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ချက်ချင်းတော့ မြင့်မလာဘူး အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။
October 2012 edited October 2012 Registered Users
So your question is how to create crawling infrastructure ?
What keywords are we using and detail about meta tag?
If so, I have no answer for that, sorry. You have to learnalot for it.
i suggest you get someone who have been doing this forawhile(no, not me) if you need it to be quickly effective. previously,there were 'tricks' that could guarantee top spots without much good content. after penguin and panda, those may no longer work.
I would say SEO is an art. The way how you structure your site according to industry niche and competition. The optimization strategy may vary, however, the discipline and the basic rule is to strictly follow Google Web Master guidelines and ever changing algorithm updates. There is no shortcut or easy way out in SEO methodology if somebody does so, Google will definitely hunt one's down, which isapenalty. If there isaneed to explore more about SEO techniques, you may like to apply those agencies like http://www.seomyanmar.com/mm/ to explore more about internet advertising technologies.